ချစ်ကြည်အေး: မောင်နဲ့အတူ ကျွန်မကို….(အပိုင်း-၃-ဇာတ်သိမ်း)
အချိန်တွေဟာ သူ့အလုပ် သူလုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ဖြင့် ပိုမြန်လွန်းနေသလိုပါပဲ။ မနက်ဖြန်ဆို ကျွန်မ ပြန်ရတော့မယ်။ ခန့်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ နေရဦးတော့မယ်။ ဘယ်တော့များမှ ပြန်တွေ့နိူင် ကြမယ်မသိတဲ့ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီမှာ နေကြရဦးတော့မယ် ခန့်ရယ်။ ကျွန်မ မပြန်ချင်သေးဘူး၊ မပြန်ချင်သေးပါဘူး ခန့်ရယ်။
ကျွန်မကို ခန့်နဲ့အတူ ဟိုးအဝေးကြီးကို ခေါ်သွားပါလားဟင်။ ခန့်ရယ်…ကျွန်မ မပြန်ချင်ဘူး။ ခန့်နဲ့ မခွဲနိူင်ဘူး သိလား။
“မချိုသွေး မပြန်ခင်ည ကျွန်တော့်အခန်းကိုလာလည်ဖို့ ဖိတ်ပါရစေဗျာ၊ ကျွန်တော် ညစာ ချက်ကျွေးမှာပေါ့၊ အီတလီခေါက်ဆွဲ စားမလားဟင်” တဲ့….
ဟန်မဆောင်နိူင်လောက်အောင် ကျွန်မခေါင်းကို အလောတကြီးညိတ်မိတော့ ခန့်က ကျွန်မခေါင်းကို အုပ်ကိုင်ပြီး “မချိုသွေးဟာလေ တစ်ခါတစ်လေ ကလေးလိုပဲ” တဲ့….။ ဟုတ်လား၊ ကျွန်မ မသိပါဘူး ခန့်ရာ….၊ ခန့်ရှေ့ရောက်ရင် ကျွန်မက အလိုလိုကျိုးနွံနေတော့တာပါ။ အလိုလိုက်ခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ခုန်ပေါက်ပျော်ရွှင်လိုက်ချင်စိတ်တွေနဲ့ ကျွန်မက ခန့် ဘာပြောပြော ပြုံးလို့သာနေ မိတော့တယ်။
ခန့်အခန်းကလေးက သိပ်မကျယ်လှပေမဲ့ သေသေသပ်သပ် ချစ်စရာလေးရယ်။ ဆေးအဖြူရောင် သုတ်ထားတာမို့ လင်းချင်းလို့။ “ဒါ ခန့် စာတွေရေးရေးနေတဲ့စားပွဲပေါ့ ဟုတ်လား” ဆိုတော့ ခန့်က ပြုံးရင်း “ဒါပေါ့ ကျွန်တော် မချိုသွေးနဲ့ စကားပြောတိုင်း ဒီခုံလေးမှာ ထိုင်၊ ဒီကွန်ပြူတာလေးနဲ့ ဒီစားပွဲလေးပေါ်မှာ စာတွေရိုက်နေခဲ့တာ၊ တစ်ယောက်ထဲပေါ့ဗျာ” တဲ့။
“ဝိုင်အနီလောက်တော့ သောက်ပါတယ်နော် မချိုသွေး” ဆိုပြီး ဝိုင်တွေစီရီတင်ထားတဲ့ သစ်သားစင်ကလေးပေါ်က ဝိုင်အနီတစ်လုံး ယူလိုက်ရင်း “ဒီကောင်က Merlot-မဲယ်လို့ထ် ပြင်သစ်ဝိုင်၊ ၂၀၀၇ကကောင်” လို့ ကျွန်မကို လှမ်းပြောတယ်။ နောက်တော့ ခန့်က ခေါက်ဆွဲဖတ်ပြုတ်ဖို့ဆိုပြီး မီးဖိုလေးထဲ ဝင်သွားရော။
ကျွန်မကိုတော့ “ပျင်းရင် ကွန်ပြူတာကြည့်နေလေ” ဆိုပြီး မီးဖိုထဲ ဝင်မလာဖို့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ဆိုပြီး ပြောတာမို့ ကျွန်မမှာ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်နေမိတယ်။ ကြည့်ရင်းက ပဲ အောက်ခြေဘားပေါ်မှာ “Thwe says” ဆိုပြီး ပေါ်လာတာမို့ ခန့် သူ့ဂျီတော့ခ်ကို ဆိုင်းအောက် လုပ်မထားဘူးလို့ သိလိုက်တယ်။ ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး၊ ချက်တင်ဝင်းဒိုးလေးဖွင့်ရင်း “ခန့်ရေ ဒီမှာ သွယ်တဲ့ ခန့်သူငယ်ချင်း တက်လာတယ်” လို့ လှမ်းခေါ်လိုက်မိတယ်။ ခန့် မကြားဘူးထင်ပါရဲ့၊
ခန့်ထွက်မလာတာနဲ့ဘဲ ချက်တင်းဝင်းဒိုးမှာ ပေါ်နေတဲ့ “ခန့်စည် ဘာတွေလုပ်” ဆိုတဲ့ စာသားကို “အရှုပ်တွေ လုပ်” လို့ ခန့်ပြောနေကျပုံစံအတိုင်း ပြန်ရိုက်လိုက်မိတယ်။ နောက်မှ အော် သွယ်က ပြန်ခေါ် တာကိုး၊ အပေါ်မှာ ခန့်ခေါ်ထားတဲ့ ပြောလက်စတွေ ရှိနေတာ။ သိချင်စိတ်တွေကို တားမရတာနဲ့ ခန့် ဘာတွေရေးထားပါလိမ့်ဆိုတာကို ကျွန်မ ဖတ်ကြည့်လိုက်မိပါရဲ့။ တစ်ပါးသူ ပါစင်နယ်ဆိုတာကို သိပေမဲ့ ကျွန်မနဲ့ ခန့်က ခု သူစိမ်းတွေမှ မဟုတ်တာပဲလေ ဆိုတဲ့ ပိုင်နိူင်စိတ်တွေနဲ့ ဖတ်မိတယ်ဆိုပါတော့။
5:45 PM Min: သွယ် အလုပ်ထဲမှာပဲလား၊ ကျွန်တော် သတိရနေပါတယ်ဗျာ
5:45 PM Min: နကောင်းအောင် နေဦး၊ ဂရုစိုက်နော်
5:48 PM Min: ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြဦးမယ်လေ
6:45 PM Thwe: ခန့်စည် ဘာတွေလုပ်
6:46 PM Min: အရှူပ်တွေ လုပ် :)
ဖတ်နေရင်းကပဲ သွယ့်ဆီက နောက်တစ်ကြောင်း ထပ်တက်လာတာက….
6:47 PM Thwe: သွယ့်ပါးပေါ်က အနမ်းတွေက ခန့်စည်ကို သတိရနေတယ် တဲ့ သိလား ခိခိ :P
ဘုရားရေ…။ ကျွန်မမျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားတော့တယ်။ သွယ်ဆိုတာ….သွယ်ဆိုတာက…ခန့်နဲ့ ဘယ်လို အဆင့်ထိ ပတ်သက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးပါလိမ့်။ ခန့်ကွန်ပြူတာ စကရင်နောက်ခံမှာ အမျိုးသမီးတစ်ချို့ရဲ့ ပုံလေးတွေ၊ ပုံလေးတွေကို အသေအချာစုစည်းပြီး အယ်လဘမ်လေးတစ်ခုလို လုပ်ထားတာမို့ ခန့်ရဲ့collection တစ်ခုလို့တော့ သိလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီ သေချာသဲကွဲ မမြင်ရပေမဲ့ မြင်ရအောင်လည်း ကျွန်မ မကြိုးစားချင်တော့ဘူး။ ခန့်ကိုယ်တိုင် နောက်ပြောင်ပြောဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ “ကျွန်တော်က Professionally bad guy နော် မချိုသွေး” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ခုချိန်မှာ မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်လိမ့်ဆင်းကျလာအောင် ကျွန်မရင်ကို လေးနက်ထိရှစေတော့တယ်။ နာကျင်ထိခိုက်လွန်းရတယ် ခန့်ရယ်…။
ကျွန်မ ကွန်ပြူတာကနေ မျက်နှာကိုခွာလိုက်တော့တယ်။ နံရံတစ်ဘက်ကပ်ခင်းထားတဲ့ ခန့်ကုတင်ပေါ် တင်ပါးလွဲခြေချထိုင်လိုက်ရင်း ကုတင်ဘေးက ခန့်ဂစ်တာကို ကောက်ကိုင် ကြိုးညှိလိုက်မိတယ်။
♩ ♬ ♭♩ ♬ ချစ်ခွင့်မရှိတဲ့ နှလုံးသားမှာ အားငယ် မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေ မြိုသိပ်ရင်းနဲ့
အသည်းလေးကွဲမှ အရမ်းချစ်တာ ပိုနားလည် အမြဲတမ်းရင်မှာ စွဲလမ်းနေတယ် ကိုယ်ရူးမယ်၊ နေ့နေ့ ညည မင်းလေးကို လွမ်းတယ် အစားထိုးပြီးလည်း နောက်တစ်ယောက်ကို မချစ်နိုင်တယ်
အားနည်းချက်နဲ့ တို့ဘဝကို ကြည်ဖြူမလားကွယ် ကိုယ်မပြောင်းလဲတမ်းချစ်တာ မင်း နားမလည်
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အဝေးဆုံးကို ထွက်ပြေးသွားချင်ပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ အမြဲတမ်း မင်းဆီမှာပဲ ထာဝစဉ်မမေ့ဘူး ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း စွဲလမ်းချစ်နေအုံးမယ် ရင်ခုန်ရင်း တမ်းတရင်း ကြေကွဲ
ကိုယ်ဟာ မင်းလေးအတွက်တော့ အရုပ်ကလေး တစ်ရုပ်ပါပဲ ♬ ♩ ♬ ♭
သီချင်းသံကြောင့် ထင်ပါရဲ့၊ ခန့်က မီးဖိုထဲကနေ ခေါင်းပြူကြည့်ရင်း ညာဘက်လက်မ လှမ်းထောင်ပြတယ်။ ကျွန်မခေါင်းကို ငုံ့ချလိုက်မိတယ်။ ဆံပင်ရှည်တွေ ဝဲကနဲဟာ ကျွန်မမျက်ရည်တွေကို ခန့်မမြင်အောင် ကွယ်ပေးထားနိုင်မှာ….။ မျက်တောင်တွေကို ပုတ်ခတ်လိုက်ရင်း မျက်ရည်တွေကို ကျွန်မ ထိန်းလိုက်တယ်။
ခန့်က ခေါက်ဆွဲထည့်ထားတဲ့ ဇလုံအကြီးကြီးတစ်လုံးကို စားပွဲပေါ်လာချရင်း “အိုကေ မချိုသွေး ဗိုက်ဆာနေပြီလား၊ ကျွန်တော်တို့ စလို့ရပြီနော်” တဲ့။
ဝိုင်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲကို ဝိုင်အနီတွေ ဖြည့်နေရင်းက ခန့် ကျွန်မကို ပြုံးပြတယ်။ ကျွန်မလည်း ပြန်ပြုံးပြ လိုက်မိတယ်ထင်ပါရဲ့။ ခန့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက ပန်းရောင်….၊ ကျွန်မ ထိကြည့်လိုက်ချင်စိတ်တွေကို မနည်းထိန်းထားရတယ်။
“မချိုသွေး ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်ကြယ်သီးတစ်လုံး ဖြုတ်လိုက်ပါလားဟင်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါဗျာ အိုက်နေမှာပေါ့၊ အပေါ်ကြယ်သီးတစ်လုံး ဖြုတ်လိုက်နော်”
“ရှပ်အင်္ကျီကို ကြယ်သီးအစေ့တပ်ဝတ်တာ ကျွန်တော်တော့ မနေတတ်ဘူးဗျ၊ လည်ပင်းအစ်သလို ခံစားရလို့၊ ကဲ လာဗျာ Cheers နော်၊ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်ဆုံတွေ့ကြဖို့ တို့စ်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ”
ခန့်ဝိုင်ခွက်နဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းတိုက်ပြီး မော့သောက်လိုက်တဲ့ ဝိုင်အနီဟာ ကျွန်မလည်ချောင်းတစ်လျှောက် ပူကနဲ ဆင်းသွားတယ်။
♩ ♬ ♭♩ အိပ်စက်သွားတဲ့ ငါ့နှလုံးသား မင်းနဲ့တွေ့မှ နိူးလာတယ် ကွဲအက်သွားတဲ့ အသည်းဒဏ်ရာ မင်းရဲ့လက်နဲ့ ပျောက်ကုန်ပြီ ဟောင်းနွမ်းခဲ့တဲ့ အိပ်မက်များ အေးစက်မည်းမှောင် ငါ့ညများ အိပ်မက်သစ်တွေ မွေးဖွားလို့ ရင်ကိုနွေးထွေးသွား အကြင်နာညများ လင်းလက်သွား ♬ ♩ ♬ ♭
အချစ်စွမ်းအားတဲ့၊ အဲ့ဒီတစ်ပုဒ်ထဲကိုပဲ အထပ်ထပ်ကျော့ပြီး ခပ်တိုးတိုးလေးဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံက အခန်းလေးထဲ ဝဲလွင့်လို့ရယ်။
ဝိုင်ခွက်နှုတ်ခမ်းပေါ်ကနေ ကျွန်မမျက်နှာကို ကျော်ကြည့်နေတဲ့ ခန့်မျက်ဝန်းမှေးစင်းတွေ ကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ….
ခန့်လည်တိုင်တစ်လျှောက် ကျွန်မလက်ညှိုးလေးနဲ့ ထိတို့ကြည့်နေမိတဲ့ ကျွန်မလက်တွေ….
အဲဒီကျွန်မလက်တွေကို ခန့်က အုပ်မိုးကိုင်လိုက်တဲ့အခါ….
ခန့်က ကျွန်မရှေ့မှာ ထိုင်နေရာကနေ ကျွန်မဘေးနားကို သူ့ထိုင်ခုံဆွဲယူလာပြီး ပူးကပ်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါ….
ခန့်နှုတ်ခမ်းတွေဟာ နွေးဆဲပဲ….၊ ခန့်ဆီက after shave ထင်ပါရဲ့၊ အနံ့တစ်မျိုး သင်းသင်းလေး ပျံ့လို့၊ ယောကျာ်းဆန်လွန်းလိုက်တာ။ ကျွန်မ ရုတ်တရက် ခန့်ညာဘက်နားရွက်လေးကို လက်နဲ့ ထိကြည့်လိုက်မိတယ်။ ခန့်နားရွက်ဖျားလေးတွေက ရဲလို့ရယ်…။ ခန့်က ကျွန်မမျက်လုံးတွေထဲအထိ သူ့အကြည့်တွေကို လွှတ်ကြည့်နေတဲ့အခါ ကျွန်မမှာ…အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ မူးရီတုန်ခိုက်လို့၊ အသိစိတ်တွေထဲ ဘာကိုမှ ကပ်မရနိူင်တော့။
တစ်လုံး….၊ နှစ်လုံး…၊ သုံးလုံး…၊ သုံးလုံး မြောက်မှာ…။ ကျွန်မ ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်နေတဲ့ ခန့်လက်တွေအပေါ် ကျွန်မလက်တွေက အုပ်ကိုင် လိုက်မိရင်း….
“ခန့် ကျွန်မတို့ တော်ကြပါစို့နော်၊ ဒီအထိပဲ ရပ်လိုက်ကြပါစို့”
ခန့်မျက်နှာ ရဲကနဲဖြစ်သွားရင်း ကျွန်မရှပ်အင်္ကျီပေါ်က သူ့လက်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တယ်။
“ခန့်က ကျွန်မကို ချစ်လို့လား ဟင်”
မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကို အောက်ချထားရင်း ကျွန်မ မေးမိတာ.....
သိမ်ငယ်စိတ်တွေနဲ့ မျှော်လင့်တကြီး မေးမိတာ....
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ကျွန်မအသံတစ်သံထဲ….
ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး သေးငယ် လွင့်ပျောက် သွားသလို ခံစားခဲ့ရတာ…။
နာ ကျင် လိုက် တာ….
ခန့်က နှုတ်ထွက်စကား တစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ ကျွန်မလက်မောင်းနှစ်ဘက်ကနေကိုင်ပြီး ကျွန်မကို ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို တင်းကြပ်နေအောင် ပွေ့ဖက်ထားတော့တယ်။ ကျွန်မနဲ့ ခန့်ဟာ တစ်သားတည်း….။
“ခန့် ခန့်ရယ် ကျွန်မ ခန့်ကို ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တာပဲ သိလား”
အို….ကျွန်မ ထိန်းမထားချင်တော့ဘူး၊ ကျွန်မနှုတ်က အလိုလိုဖွင့်ပြောလိုက်မိပြီ။ ခန့်ရယ်….ကြာလှပြီနော်၊ ကျွန်မ ခန့်ကို ချစ်တာ။ ခန့်ကဖြင့် ရက်စက်နိုင်တယ်…။ ကျွန်မ မျက်ဝန်းတွေကို မှိတ်ချထားလိုက်မိတယ်။
ကျွန်မပါးပေါ်က မျက်ရည်တွေဟာ ခန့်ပါးပေါ်မှာ….ကူးလူးစွတ်စိုလို့။ ခန့်က မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးရင်း “ခဏလေးနေနော် မချိုသွေး၊ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ခဏလောက် ဆက်နေကြရအောင်” တဲ့…
ခန့်ထွက်သက်နွေးနွေးတွေဟာ ကျွန်မညာဘက်ပါးပြင်ပေါ်မှာ စည်းချက်ကျကျ ထိတွေ့လို့၊ ခဏနေမှ…
ခန့်က ကြယ်သီးသုံးလုံးကို ပြန်တပ်ပေးပြီး ကျွန်မကို ဆွဲထူထစေခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ရှပ်အင်္ကျီကို လည်း သေချာပြန်ဆွဲဆန့်ပေးသေးရဲ့၊ ပြီးတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းပွေ့ဖက်လို့ ကျွန်မဆံနွယ်တွေကို မွှေးရှိုက်နေပြန်တယ်။
“ကဲ ပြန်တော့နော်၊ ကျွန်တော် မချိုသွေးကို ဟိုတယ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်”
သူ့ရင်ခွင်ထဲကနေ ကျွန်မကို ဆတ်ကနဲခွာထုတ်ရင်းက တီရှပ်တစ်ထည်ကို ကောက်စွပ်နေတဲ့ ခန့်ကို ငေးကြည့်ရင်း ကျွန်မရင်ထဲ ဟာကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ရှင်သိရဲ့လား ခန့်ရယ်။ ကျွန်မ နေချင်သေးတာ၊ မပြန်ချင်သေးဘူး။ ကျွန်မက…၊ ကျွန်မက ရှင့်အနားမှာ အချိန်ရသလောက် နေချင်သေးတဲ့ မိန်းမပါ ခန့်ရယ်….။ ကျွန်မက ခန့်ကို သိပ်တွယ်တာမိတဲ့ မိန်းမရယ်လေ….
ကျွန်မ ကင်မရာကို ထရိုင်ပေါ့မှာ တပ်လိုက်ပြီး ကျွန်မနဲ့ ခန့် နှစ်ယောက်တွဲပုံတွေ တစ်ပုံပြီး တစ်ပုံ ရိုက်ယူနေမိတယ်။
နောက်ထပ် လေး-ငါးကွက်ရိုက်အပြီးမှာ ထရိုင်ပေါ့ကို ကျွန်မ ခေါက်သိမ်းလိုက်တယ်။ ခန့်က ကျွန်မကို ထွေးပွေ့လို့ ခုတင်ဘေးမှာရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးရှေ့နားသွားရပ်ရင်း မှန်ထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ ခန့်နဲ့ကျွန်မရဲ့ပုံရိပ်လေးကို ငေးကြည့်နေလေရဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်မလက်ထဲက ကင်မရာကိုဆွဲယူရင်း မှန်ထဲက ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ပုံရိပ်ကို တစ်ဖျတ်ဖျတ် ရိုက်ယူလေတော့တယ်။ ခန့်ရယ်….၊ ကျွန်မတော့လေ ရှင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှအရာရာကို ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့များ မေ့နိူင်ပါတော့မလဲရှင်။
“တော်ပြီနော် မချိုသွေး လာ သွားကြစို့”
“ဟင့်အင်း ခဏလေး ခဏလေးပါ ခန့်ရယ်”
ခန့်အခန်းပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်ရင် လမင်းကြီးကို လှမ်းမြင်နေရတယ်။ လပြည့်ညမို့ ထင်ပါရဲ့၊ ဝိုင်းစက်ရွှန်းအိနေတဲ့လမင်းကြီးဟာ ခန့်နဲ့ကျွန်မအပေါ် သူ့ရောင်စဉ်တွေ ဖြာဝေလွှမ်းခြုံလို့ထားခဲ့တယ်။
ပြတင်းပေါက်ကိုမျက်နှာမူရင်း လမင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေတဲ့ ခန့်ကို နောက်ကျောကနေသိုင်းဖက်လို့ ဆံပင်တိုလေးတွေတုံးတိနဲ့ ခန့်ဂုတ်ပြင်လေးကို နောက်ဆုံး ဖိကပ်မွှေးလိုက်မိတယ်။ ခန့်က သူ့ခါးပေါ်က ကျွန်မလက်တွေကို ပြန်ဆုတ်ကိုင်ရင်း “ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် လမင်းကြီးကို အတူတူ ငေးကြည့်နေဖူးသွား ကြပြီ၊ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့နော် မချိုသွေး” တဲ့။ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်မိတယ်။
ခန့်လက်ကိုဆုတ်ကိုင်ရင်း ခန့်အခန်းထဲက ကျွန်မတို့ထွက်လာချိန် အပြင်မှာ လမင်းကြီးက သာတုန်း သာဆဲ….။
ကျွန်မကို အွန်လိုင်းချက်အင်လုပ်ပေးထားတာမို့ အစောကြီး လေဆိပ်ဆင်းစရာမလိုဘဲ တစ်နာရီခွဲလောက် အလိုမှ လေဆိပ်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ ခန့်မျက်နှာက တည်လို့။ ပြုံးတာတောင် အသက်မပါသလို၊ အဝေး ကို ငေးလို့…ရီဝေလို့….
“သတိရနေနော် မချိုသွေး၊ ကျွန်တော့်ကို မမေ့ပါနဲ့နော်”
ခန့်က “ကျွန်တော်တို့ ကော်ဖီတစ်ခွက် နှစ်ယောက်အတူ သောက်ကြရအောင်နော်” တဲ့။ ကော်ဖီသောက်ကြရင်း ခန့် ဖုန်းထဲက အချစ်စွမ်းအားသီချင်းကို နားကြပ်တစ်ယောက် တစ်ဘက်စီ တပ်ပြီး အတူနားထောင်မိတဲ့အခါ ကျွန်မ မျက်ရည်ကျမိပြန်တယ်။ ခန့်ကတော့ နီရဲလာတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို အဝေးဆီ လှမ်းပို့ထားလေရဲ့။ ကော်ဖီဆိုင်ကအထွက်မှာ အနားကဖြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက် အကူအညီနဲ့ ခန့်နဲ့ကျွန်မ ဓါတ်ပုံအတူရိုက်ကြသေးတယ်။
“ဓါတ်ပုံတွေ ပို့ပေးဦးနော် မချိုသွေး”
ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်ပြရင်းက ကျွန်မ အရဲစွန့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ရှင်းလင်းချင်တယ်။ ကျွန်မနေရာက ဘယ်မှာ၊ ခန့်နှလုံးသားက ဘယ်မှာဆိုတာတော့ ကျွန်မ သိခွင့်ရှိမယ် ထင်ပါရဲ့။
“ကျွန်မ မေးချင်တယ် ခန့်ရယ်၊ ခန့်မှာ တစ်ခြားသံယောဇဉ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ သိပါတယ်။ တစ်ခုပဲ ခန့်သံယောဇဉ်က သူတို့အားလုံးအပေါ်မှာထက် ကျွန်မအပေါ်မှာ ပိုလား ဟင်”
ဟိုးအဝေးဆီ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေပို့ထားတဲ့ ခန့်နှုတ်ခမ်းတွေက တင်းတင်းစေ့ပိတ်လို့၊ သိပ်ခက်နေသလားဟင် ကျွန်မမေးခွန်းက၊ နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် ညာချင်လည်း ညာလိုက်ပါတော့လား ခန့်ရယ်။ ကျွန်မ စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်လေ….။
ခန့်ဟာ လိပ်ပြာကလေးလို လွတ်လပ်စွာ ဟိုဒီပျံဝဲချင်နေတဲ့၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဆက်ဆံရေးမျိုး မရှိချင်တဲ့၊ နည်းနည်းကလေးမှ အချည်အနှောင်မခံချင်တဲ့၊ မိန်းကလေးတွေတိုင်းကို အချိုတွေချကျွေး၊ အကြင်နာတွေ မျှဝေနေတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်လားကွယ်….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မနဲ့အတူ ကျွန်မအနားရှိနေပေးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအတွက် ကျွန်မ ရှင့်ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ခန့်၊ ပြီးတော့လေ ညာပြီးတော့တောင် ကျွန်မစိတ်ကို နှစ်သိမ့်မှုမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရော ကျွန်မက ခန့်ကို ကျေးဇူးတင်ရဦးမလားဟင်…
ကျွန်မ အထဲဝင်ရတော့မယ်။ အဲဒီအထိ ကျွန်မနဲ့ခန့် တွဲလက်တွေ ဖြုတ်မပစ်နိူင်ကြသေးဘူး။ ခန့်လက်တွေက ကျွန်မလက်တွေကို ပိုပိုပြီး တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ခဲ့လို့။ ခန့်ရယ် ဘယ်လိုလဲ ကျွန်မ ဘယ်လိုနားလည်လိုက်ရမှာလဲရှင်။ အထဲရောက်တော့လည်း မှန်ချပ်တွေကတစ်ဆင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငေးကြည့်နေမိကြတုန်း။ မခွဲနိူင်ဘူး…. မခွဲနိူင်ပါဘူး ခန့်ရယ်၊ မြင်တွေ့နေနိူင်သေး သရွေ့ တွေ့ချင်နေကြသေးတာ။
ဒါပေမဲ့ ခန့်ရယ်….ကျွန်မက ရှင့်အတွက် ဘာလဲ၊ ရှင့်နှလုံးသားရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ကျွန်မက ရှိနေသလဲဟင်၊ ရှင့်ရင်ထဲမှာ ကျွန်မအတွက် နေရာကို မရှိခဲ့တာလား….။ ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းမှာဝေမျှနေတဲ့ ခန့်ရဲ့အချစ်တွေထဲ ကျွန်မက တစ်ယောက်အပါအဝင်မျှသာ…။ အဲသလောက်ပဲတဲ့လား…..
ကျွန်မဘက်က ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး၊ ကျွန်မရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံး အိတ်သွန်ဖာမှောက် ဖွင့်ချပြခဲ့ရသမျှ ရှင့်ဘက်က ကျွန်မအပေါ် ဖွင့်ချမပြချင်တဲ့သူ…။ နည်းနည်းကလေးမှ ကျွန်မခံစားချက်တွေကို စာနာမပေးခဲ့တဲ့သူ….။ လိုချင်တာကိုသာ ရယူခဲ့ပြီး ရှင့်ဘက်ကတော့ နည်းနည်းကလေးမှ ပြန်မပေးချင်ခဲ့တဲ့သူ…။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မတို့လက်တွေ ဖြေလွှတ်ချခဲ့လိုက်ရတာပဲ မဟုတ်လား….
လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်မှာ အရှိန်ယူလို့ လေယာဉ်စထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခန့်ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့မြို့ ကလေးကို ပြတင်းပေါက်ကတစ်ဆင့် ဓါတ်ပုံတွေ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ယူနေမိတယ်။ တစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံ….အို အများကြီးပါပဲ။ နောက်တော့ ကျွန်မနဲ့ခန့် အတူရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ လွမ်းလိုက်တာ… လွမ်းလိုက်တာခန့်ရယ်၊ ကျွန်မ ကြိုးစားပြီးပြုံးနေမိပါတယ်။
ကျွန်မပါးပေါ်မှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့…။ ကျွန်မ မသုတ်ပါရစေနဲ့တော့ ခန့်ရယ်။ ကျပါစေတော့လေ….။ ခုချိန်ဆို လေယာဉ်ထွက်မှဖတ်နော်ဆိုပြီး ကျွန်မရေးပေးခဲ့တဲ့ကဗျာကို ခန့် ဖတ်နေရော့မယ်။
"တစ်ဘက်သတ် လွမ်းဆွတ်ခြင်း" လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အခန်း
"မထားခဲ့ပါနဲ့ ကျွန်မကို... မောင်ရယ်..."
နောက်စိတ်နဲ့ ခန္ဓာက ငြင်းဆန်တယ် ခါးခါးသည်းသည်း...
မျက်ရည်တွေဟာ ဖြောင့်စင်းရိုးသားခဲ့ကြောင်း စစ်ချက်အဖြေထွက်တယ်
မျက်ရည်တွေမှာ ပဉ္စလက်တွေ မာယာတွေ ဘာတစ်ခုမှ မပါတာကို တွေ့ရတယ်
မောင်...ကျွန်မကို အချိုတွေချကျွေးပြီး ညာနေမဲ့အစား
သူစိမ်းဆန်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ကြည့်ပစ်လိုက်တာကမှ
ပို ဖြေသာမယ် ထင်ပါရဲ့ မောင်
မောင့်နှလုံးသားတွေကို DNA စစ်ကြည့်ရဲရဲ့လား
စစ်ချက်အဖြေကိုရော ကျွန်မကို အသိပေးရဲပါ့မလား...
ဖြေ ပါ မောင်.....
ခန့် ဘယ်လိုဖြေမလဲ၊ ခန့်ဆီမှာ ကျွန်မအတွက် အဖြေရောရှိနေရဲ့လားဆိုတာတွေကို ကျွန်မ မသိချင်တော့ပါဘူးလေ။
လေယာဉ်မယ်ကလေးကို ကျွန်မ ဘာမှ မစားချင်ကြောင်း၊ အိပ်ပဲ အိပ်ချင်တာမို့ နှိုးပြီး မကျွေးဖို့အကြောင်းပြောပြီး မျက်စေ့စုံမှိတ်လို့ လိုက်ပါလာခဲ့တော့တယ်။ မျက်ရည်တွေ ကုန်ခမ်းခြောက်သွေ့ သွားတော့မှ လေယာဉ်မယ်ကလေးကိုခေါ်ပြီး ရေတစ်ခွက်တောင်းတယ်။ ရေခွက်ထဲက ရေကို တစ်ငုံ ငုံလိုက်တယ်။ ရေကျန်တွေရှိနေသေးတဲ့ ရေခွက်ကို ကျွန်မရှေ့က စားပွဲလေးပေါ် တင်လိုက်တယ်။ ကင်မရာအိတ်ထဲက ကင်မရာကို ထုတ်တယ်။
အမှတ်တရတွေ၊ အနမ်းနွေးထွေးတွေ၊ လွမ်းဆွတ်မှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ၊ ရှုံးနိမ့်သိမ်ငယ်မှုတွေ၊ မျက်ရည်တွေ၊ တွဲလက်တွေ၊ သတိတရတွေနဲ့ ဒင်းကျန်းပြည့်နှက်နေတဲ့ ကင်မရာမှတ်ဉာဏ်ကို ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ခန့်နဲ့ကျွန်မ ရှိတယ်။ ပြီးမှ Kingston SD-8Gလို့ ရေးထားတဲ့ အမဲရောင်မှတ်ဉာဏ်ပြားလေးကို ကျွန်မရှေ့ကရေခွက်ထဲ ဖြည်းဖြည်းသာသာလေး လွှတ်ချလိုက်တော့ တယ်။
အဲဒီရေခွက်ထဲမှာ ကျွန်မအသက်၊ ကျွန်မနှလုံးသား၊ ကျွန်မမျက်ရည်၊ ကျွန်မဘဝ၊ ကျွန်မရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာ၊ ကျွန်မရဲ့ အရာရာ…..
သေ ဆုံး သွား ခဲ့ ပြီ…...
ဆုမြတ်မိုး Tue Jul 09, 09:06:00 AM GMT+8
မိုးငွေ့........ Tue Jul 09, 01:22:00 PM GMT+8
သိတယ်လေ ဇာတ်သိမ်းက ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ...ဇာတ်မပေါင်းတာကောင်းတယ်...ချိုသွေးနှောင်ကို ထပ်ပြီး မနာကျင်စေချင်တော့ဘူး ဒီလောက်နဲ့တော်လောက်ပြီ...
အမ်တီအန် Tue Jul 09, 06:53:00 PM GMT+8
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ဆော့ကစားစရာ မဟုတ်ဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် ချစ်သူရော၊ ဆော့ကစားသူပါ နာကျင်တတ်တယ်..နော်..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Tue Jul 09, 07:42:00 PM GMT+8
Memory Card လေးထဲက ပုံရိပ်လေးတွေ ပျက်သွားဦးတော့ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေက တော်တော်နဲ့ ပျောက်ဖို့ မလွယ်ဘူးထင်ရဲ့
ခန့်လိုယောက်ျားတွေကို မုန်းလိုက်တာ.. ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။း(
အစ်မချစ်ရဲ့ အရေးအသားထဲ မျှောသွားလိုက်တာ ကိုယ်တိုင်တောင် မချိုသွေးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) Tue Jul 09, 11:54:00 PM GMT+8
ဝတ္ထုကို ဝတ္ထုလို ခံစား မိခဲ့တယ် အစ်မ ။ သိပ်ကို ရသ မြောက်ပါတယ် မချိုးသွေး ကတော့ ဆူးနစ်စွာ ခံစားနေရပေလိမ့်မယ်ပေါ့ ။
ရင်လှိုင်းခတ်သံ Fri Jul 12, 09:33:00 PM GMT+8
သိပ်ကောင်းတဲ့ ၀တ္တုလေးနော် ။
ဆွေးမြေ့မြေ့လေး ကျန်ခဲ့တယ် ။
တန်ခူး Fri Jul 12, 11:55:00 PM GMT+8
ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အရေးအသားကို နှစ်သက်မိပါတယ် မ ရေ. ၃တွဲလုံးတပြိုင်နက် ဖတ်ဖြစ်တော့ ခန့် နဲ့ မတွေ့ ခင်အထိ ခန့် အပေါ် စာဖတ်သူထားမိတဲ့သံသယက လူပျိုမှဟုတ်ပါလေစလို့ လေ. စာရေးသူပထမအပိုင်းတွေမှာ ပါးနပ်စွာပါးပါးလေးချပြသွားတာကို အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဇာတ်နာနာဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အဆုံးတွေးမိလိုက်တာပြောပါတယ်. တခုပဲ မ ရယ်. ခန့် အကြောင်းကိုအချိန်မှီလေးသိလိုက်ပါရဲ့နဲ့စီးမျောပျော်ဝင်ပြီး အန္တရာယ်က လက်တလုံးလေးလွတ်သွားတဲ့ ချို့ ကို အားမလိုအားမရဖြစ်မိတာအမှန်ပဲ. မိန်းကလေးတွေသတိထားသင့်တဲ့အရာပေါ့နော်.
khayayphyu Sun Jul 14, 10:00:00 PM GMT+8
ကျားသနားလို့ နွားချမ်းသာသွားတာ အပြင်မှာဆို ကြယ်သီးသုံးလုံးတောင်ဖြုတ်ပြီ:မှ ဘယ်ပြန်လွတ်လိမ့်မလဲ (နေချင်သူကလဲ အလိုတူ အလိုပါလေ)
sosegado Mon Jul 15, 10:53:00 PM GMT+8
Kingston က ရေထဲကြယုံနဲ့ မပျက်ဘူး
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) Tue Jul 16, 10:28:00 AM GMT+8
မောင်နဲ့အတူ ၁ ၂ ၃ ကို အစကနေအဆုံး ပြန်ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် အစ်မရေ။ ဖတ်ပြီးတော့ လွမ်းဆွတ်ပျံ့ရတယ်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။
KMT Tue Jul 16, 03:52:00 PM GMT+8
ရင်ကိုထိခတ်ခံစားရပါတယ် . . .
Sint Si Sat Sep 14, 01:22:00 PM GMT+8
ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အရေးအသားကို နှစ်သက်မိပါတယ်